China oo qorshaynaysa in ay Dhisto Wado Train oo Isku Xirta Kismayo iyo Lamu
Dowlada Shiinaha ayaa balaarineysa mashaariic ay ka wado, wadamo badan oo ku yaala qaarada Afrika oo uu ka mid yahay dalka Soomaaliya waxaana ku baxaya lacag gaareysa balaayiin dollarka mareykanka, sidalagi sii baahiyay mareegta CNN ee laga leeyahay Dalka Mareykanka.
Dowladda Shiinaha ayaa dooneysa inay dhisto wado train oo isku xirta magaalada xeebta Kismaayo iyo Magaalo xeebada kale eek u taal dalka Kenya Ee Lamu.
Bishii October ee sanadkii la soo dhaafay dowladda Shiinaha ayaa furtay wado train oo isku xiraysa wadamada Ethiopia iyo Djibouti taasoo dhismaheedu uu in mudda ah socday, wadadaas oo dhererkeedu gaarayo 75,000 km ayaa waxaa ku baxay dhaqaale gaaraya 4billion oo dollar.
Waxaa dhaqaalaha iyo dhismaha ka socda qaarada Afrika ee Shiinuhu ka wado qeyb ka qaadanaya shirkado laga leeyahay dalka shiinaha oo si gaara loo leeyahay, waxaana dhowaan la filayaa inay furan wado train oo isku xireysa dalalka Kenya iyo Sudan. Waxay sidoo kale qorsheenayaan inay dhisaan wado train oo isku xirta magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi ee gudaha wadanka Kenya.
Qorshaha kale ee shirkadaha wadanka shiinaha ayaa ah inay dhisaan wadooyin isku xira Suudaanta-koonfureed, Uganda, Rwanda iyo Burundi, iyadoo looga gol leeyahay isku xirka shacabka dalalka Africa sida ay sheegayaan masuuliyiin ka tirsan dowlada shiinaha.
Qorshaha laga leeyahay wadada isku xireysa magaalooyinka Kismayo iyo Lamu ayaan wali laga bixin wax faahfaahin dheeraad ah balse waxaa si rasmi ah loo ogaan doonaa marka uu bilowdo khadka ay ka sameyneyso inta u dhaxeysa labada magaalo xeebeed ee Lamu iyo Kismayo ee ku kala yaala wadamada Kenya iyo Somalia.